News Collection: अँधेरीमारका अँध्यारा दिनहरू
अँधेरीमारका अँध्यारा दिनहरू
पहिलोपटक रेल देखेर म निकै डराएँ, अताल्लिएँ । लजको ठूलो ऐनाअघि उभिँदा मैले आफैंलाई चिनिनँ । अनुहार रुँदारुँदा निकै गलेको थियो, अलिकति सुन्निएको पनि थियो ।
मलाई आफ्नो जन्ममिति थाहा छैन, नागरिकताअनुसार भने म ३५ वर्षकी भएँ । गाउँको स्कुलमा पाँच कक्षासम्म पढेकी थिएँ । १६ वर्षमै छिमेकी गाउँका चार दलालको फन्दामा परेर मुम्बई पुर्‍याइएँ । शिवपुरी जंगलमा घाँस काट्न गएका वेला क्यारसिंह तामाङ, मनु तामाङ, वीरे तामाङ र कृष्ण तामाङले पहिले फकाइफुल्याई गरे, 'चरिमाया, हिँड जाऊँ सहर । तिमीलाई राम्रो जागिर मिलाइदिन्छौँ । यो अन्धकार गाउँमा के गरेर
बस्छ्यौ ?' मैले मान्दै मानिनँ । उनीहरूले बल प्रयोग गरे, मैले पनि चिथोरिदिएँ । पछि उनीहरूले जबर्जस्ती औषधि खुवाएर मलाई बेहोस बनाए ।
भोलिपल्ट गोरखपुर पुर्‍याएपछि मात्रै होस खुल्यो । घाँस काट्दा लुंगी/चोली लगाएकी थिएँ, होस खुल्दा शरीरमा कुर्ता-सुरुवाल थियो । त्यो लामो यात्राले जिउ पूरै थाकेको थियो । त्यो मेरा लागि नितान्त नौलो संसार थियो । नयाँ मान्छेहरू ओहोरदोहोर गरिरहेका, सबै नचिनेका नौला मान्छे । मलाई दलालहरूसँग खुब डर लाग्यो । कहाँ किन लैजान लागेका हुन् ? केही थाहा थिएन । म क्वाँक्वाँ रुन थालेँ । एकजना दलालले मुख खोल्यो, 'अब फर्केर गाउँ गए तिमीलाई गाउँलेले बहिष्कार गर्छन् । हामी राम्रो काम लगाइदिन्छौँ, हिँड ।' उनीहरूले मलाई एउटा लजमा राखे । मलाई रिँगटा लागिरहेको थियो, त्यस रात भुसुक्कै निदाएँ ।
बिहान उठ्दा लामो गाडी छ्याकछ्याक गर्दै लजअगाडिबाटै आइरहेको थियो । त्यो रेल रहेछ । पहिलोपटक रेल देखेर म निकै डराएँ, अताल्लिएँ । लजको ठूलो ऐनाअघि उभिँदा मैले आफैंलाई चिनिनँ । अनुहार रुँदारुँदा निकै गलेको थियो, अलिकति सुन्निएको पनि थियो ।
मलाई दलालले फेरि बेहोस बनाए र गोरखपुरबाट कस्मिर जाने रेलमा हाले । कुन ठाउँमा ओराले थाहा थिएन । खाना खाने होटलमा लिएर गए । साइनबोर्डमा 'अँधेरीमार' लेखिएको थियो । त्यसवेलासम्म म रोइरहेकी थिएँ । होटलमा एउटी महिला आई । दलालहरूमध्ये कोहीले त्यस महिलालाई 'दिदी,' कोहीले 'माइजू' भन्दारहेछन् । मलाई माइजू भन्नुपर्छ भन्दैथे दलालले । त्यो महिलाले मलाई तानेर ट्याक्सीमा राखी र मुम्बई सेन्टरको कमाटीपुर एरियामा पुर्‍याई । कैंैचीगेट पार गर्दै भित्र पुगेपछि थुनेर राखी । साँझतिर केही मोटा महिला आएर शिरदेखि पाउसम्म हेरे, सुमसुम्याउन थाले । एकछिनमा चर्को आवाजमा हाँस्दै कपाल काटिदिन र नुहाइदिन थाले । मैले आफैं नुहाउँछु भने । उनीहरूले जबर्जस्ती मेरो पूरै कपडा खोलेर नांगो बनाइदिए र शरीर पूरै सुमसुम्याए । संवेदनशील अंग चलाउन थाले । महिलाको इज्जत महिलाले पनि लुट्दारहेछन् भन्ने पहिलोपटक थाहा पाएँ ।
एउटीले भनी, 'तँ बेचिइसकिस्, अब हाम्रो माल होस् । हामीले जे भन्छौँ, त्यही मान्नुपर्छ । भोलिदेखि तेरो काम सुरु हुन्छ । आज रातभरिमा तैँले आफन्त र गाउँले सबै बिर्सने कोसिस गर्नुपर्छ । यहाँबाट अब कहिल्यै पनि निस्केर बाहिरी संसारमा जान पाउँदिनस् ।' त्यसवेला बल्ल मलाई बेचिएँछु भन्ने लाग्यो । हाम्रो गाउँमास्तिर एउटा दलालको घर थियो । त्यहाँ वेलावेला स्कुले भेषका, विवाह भेषका र घाँसदाउरा गर्ने घरेलु भेषका केटीहरू देखिन्थे र केही दिनमै हराउँथे । गाउँले 'यसले चेलीलाई ठूलो ठाउँमा लान्छ' भन्थे । चेली बेचेर फर्केपछि उसले भोज खुवाउँथ्यो र क्यासेटमा गीत बजाउँदै घुम्थ्यो । गाउँमा उसैको इज्जत बढी हुन्थ्यो । अहिले बुझेँ, ठूलो ठाउँ त यस्तो पो रहेछ । गाउँका सोझा, कलिला दिदीबहिनीमा आफ्नो छाया देखेँ ।
उनीहरू कोठामा कोकाकोला, पानी र केही बिस्कुट छोडेर गए । मनभरि आफन्त र गाउँ नाच्न थाले । कतैबाट भाग्न सकिन्छ कि भनी हेरेँ, त्यो सम्भव थिएन । 'आत्महत्या गर्छु' भनेर कोठाभरि हेरेँ । साँझ ओडिरहेको सल निकालेर झुन्डिने विचार गरेँ । खाटमाथि चढेर ढोकाको गजबारमा सलको सुर्कानो पारेर झुन्डिएँ । तर, सल चुँडिएर पछारिएँ । आफ्नै शरीरको माया लागेर आयो । जीवनदान दिएकामा भगवान्लाई धन्यवाद दिएँ । अब भने जस्तो परे पनि व्यहोर्छु भन्ने संकल्प गरेँ ।
भोलिपल्ट तिनै आइमाईले मलाई अँधेरीमारको कमाटीपुरको ११ नम्बर गल्लीमा पुर्‍याए । त्यहाँ 'घरवाली' थिई । कोठीको सञ्चालक । सिसा र काठको ढोका भएको 'यौन व्यापार' हुने त्यो 'कोठी' -ब्रोथल) को काउन्टरमा रातो सर्ट लगाएको पुरुष थियो, जिन्स पाइन्ट र रातै टिसर्ट लगाएकी किशोरीले उसको गाला, गर्दन र छाती मुसारिरहेकी छ । केटो छिनछिनमा किशोरीको छातीमा हात पुर्‍याउँछ, ऊ मस्किन्छे । मान्छेको भीडभाड र कोलाहलमा पुरुषहरू युवती लिएर भित्र पस्छन् र उसलाई मुसार्न थाल्छन् । कसैलाई कसैको पर्वाह छैन । ग्राहक आफूलाई मन पर्ने पेसाकर्मीसँग मनलाग्दी काममा लिप्त छन् । पुरुषहरू काउन्टरमा डेढ, दुई सय रुपैयाँ तिरेर रोजेकी केटीलाई गिजोल्दै सानो कोठामा पस्छन् । एक घन्टापछि केटाकेटी अँगालो हाल्दै बाहिर निस्कन्छन् । कहिलेकाहीँ ग्राहकले जंगली व्यहोरा देखायो भने युवतीले अश्लील गाली गरिरहेकी हुन्छे । पहिलो दिनमा मलाई पहिल्यै बेचिएका दिदीबहिनीले सम्झाए, 'यहाँकी घरवालीले भनेको नमाने यिनीहरूले मार्छन् ।' भोलिपल्टदेखि मलाई त्यस्तै काममा लगाइयो ।
बुबा त सानैमा गुमाएकी थिएँ, त्यो दिन इज्जत पनि लुटियो । घर, आमा, दाजु, दिदी सम्झेर रोएँ । दलालले मलाई ५० हजार भारतीय रुपैयाँमा बेचेका रहेछन् । सुरुसुरुमा मैले थुप्रै पुरुषसँग झगडा गरेँ । पहिलो साउदी अरबको जुँगामुठे ग्राहकलाई मैले कुटेर लघारिदिएँ । मैले नमान्दा कुट्थे, चिथोर्थे । 'हाम्रो पैसा फसाउन किन आइस्, साली तेरो गाउँमा दाजुभाइ थिएन, सुत्न ?' भनेर गाली गर्थे । त्यहाँ भारतीय ग्राहक बढी आउँथे, नेपाली छिर्न रोक लगाइएको थियो । एक हप्तापछि कोठीवाली बाईले 'यहाँ काम गर्न मानिनस् भने जमिनमुनिको कोठीमा बेचिदिन्छु, जहाँबाट तँ जिन्दगीभरि निस्कन पाउँदिनस्' भनेर हप्काई । उनीहरू जसोजसो भन्छन् मैले त्यसै गर्न थालेँ । केही महिनापछि मलाई बिक्री गर्ने दलालहरूले काठमाडौंको गलैंचा कारखानाबाट अरू चार किशोरी पनि बेचेको थाहा पाएँ । त्यहाँ मैले २२ महिना बिताएँ । कहिलेकाहीँ एकै दिनमा १४ जनाभन्दा बढी ग्राहकको आवेग शान्त गरिदिनुपथ्र्यो । खाने/बस्ने व्यवस्था भित्रै थियो । त्यहाँ मेरो नाम 'अनु' राखिएको थियो ।
अँध्यारो कोठामा चौबीसै घन्टा बत्ती बल्थ्यो । निर्देशन नमान्ने दिदीबहिनीलाई दाबिलोले कुटिन्थ्यो । बिजुलीको तारले कुट्थे । एउटी दिदीको कुटाइमै ढाड भाँचियो । त्यस्ता घटना अनेकौँ भए । ६ महिनासम्म मैले भाग्ने कोसिस गरेँ तर, सकिनँ । कहिलेकाहीँ पाएको टिप्स पनि घरवालीले खोसिदिन्थी । विदेशी ग्राहकले बाहिर लिएर पनि जान्थे । १५ दिनजति राखेर कोठीमा फिर्ता गरिदिन्थे । 'मिन्स' भएको वेला पनि ग्राहकका लागि तयार रहनुपथ्र्यो । मसँग बढी इरानीहरू आउँथे, उनीहरू बढी यातना दिन्थे । चुरोटको पोलाइ पनि खप्नुपथ्र्यो । ग्राहकले एकजना दिदीको स्तनको मुन्टै छुट्याइदिएछ । आफ्नो शरीर आफ्नो थिएन । ब्वाँसाहरू उनीहरूको इच्छाअनुसार चलाउन खोज्थे । मानसिक तनाव, थकान, भोको पेट अनि शारीरिक सम्पर्क । यी सबैसँग जुधेर बाँच्नुको विकल्प थिएन । राति ४ बजेपछि सुत्ने र दिउँसो १ बजे उठ्ने रुटिन हुन्थ्यो । छिट्टै सुते 'अलच्छिनी' भन्दै घरवाली कुट्न आउँथी । कोठीमा ग्राहक एकथरी केटीको फोटो हेरेर जाने हुन्थे, अर्कोथरी बाईसँग मोलतोल गरेर मनपरेका केटी लिएर जान्थे । ग्राहक कन्डम लगाउन मान्दैनथे, हामी नलगाई छुनसम्म दिँदैनथ्यौँ । बाईहरूले धेरै थाकेका महिलालाई औषधि दिन्थे । मैले कहिल्यै औषधि प्रयोग गरिनँ । एउटा ग्राहकले ब्लुफिल्म हेरेर आएछ र अप्राकृतिक यौनसम्बन्ध गर्न खोज्यो । मैले उसलाई निकैबेर मानवताबारे सम्झाएँ । पछि उसले मसँग माफी माग्यो । हरेक पल निरीह र दुःखी भएर बाँच्नु थियो अँधेरीमारमा । प्रत्येक मिनेट मरेर बाँच्नुपथ्र्यो ।
त्यहाँ बेचिएका महिला सुरुका केही महिना भाग्ने योजना बनाउँछन् । पछि हार खाएर त्यहीँको दैनिकीमा अभ्यस्त हुन्छन् । मनभरि गाउँघर र आफन्तको माया खोज्छन् । त्यहाँ कुनै पनि दिदीबहिनी राजीखुसीले बस्दैनन् । तैपनि बाहिरी हाँसो हाँस्नुपथ्र्यो । कति दिदीबहिनीलाई यौनरोग लागेको हुन्थ्यो, तर बाईले अन्तिम अवस्थामा मात्रै डाक्टर बोलाउँथी । 'मैले तँलाई किनेकी हुँ, मैले भनेको मान्नुपर्छ' भन्थी बाईले । त्यसवेला मलाई लाग्थ्यो, पुरुष भोगी हो र हरेक महिला कोठीकी मालिक्नी । मलाई भेटेका सबै पुरुषलाई थुकौँ जस्तो हुन्थ्यो ।
०५२ साल माघमा भारतमा एचआइभी फैलिनुमा त्यहाँका अवैध कोठी जिम्मेवार भएको भन्दै मुम्बई प्रहरीले अँधेरीमारमा पनि छापा मार्‍यो र चार सयभन्दा बढी युवतीको उद्धार गर्‍यो । त्यसमा म पनि थिएँ । त्यसपछि हामीलाई मुम्बईको सरकारी गृहमा ६ महिना राखियो । ०५३ साउन ७ गते मसहित एक सय २८ नेपाली चेली काठमाडौंका सातवटा गैरसरकारी संस्थाको पहलमा काठमाडौं आयौँ । मसहित १३ युवतीलाई बालुवाटारको नवज्योति केन्द्रमा पुनस्र्थापन गरियो । त्यसको ६ महिनापछि बल्ल म गाउँ फर्किएँ । तर, गाउँलेले मलाई स्वीकार गरेनन्, परिवारले पनि आलोचना गरे । अनि मसहित प्रभावित युवतीले शक्ति समूह नामको संस्था दर्ता गर्‍यौँ । मैले सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा मलाई बेच्नेहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेँ । अदालतले चारैजनालाई १० वर्ष कैद सजाय तोक्यो । त्यस दिनदेखि म चेलिबेटी बेचबिखनविरुद्धको अभियानमा सक्रिय छु । पुनस्र्थापनको चार वर्षपछि ०५७ मा सिन्धुकोटका शम्भु तामाङ पाखि्रनसँग मेरो बिहे भयो । अहिले दुई छोरी छन् ।
'बिहेपछि बहिष्कृत भयौँ'
शम्भु तामाङचरिमायाका पति
उहाँको दुःखको कथा सुन्दा मलाई साह्रै नरमाइलो लाग्यो । बिहेपछि पनि उहाँले सुख पाउनुभएन । बिहेपछि मेरा आफन्तले उहाँलाई जथाभावी घोचपेच गरिरहे । उहाँ खुव रुनुहुन्थ्यो । एक दिन घरमा मलाई खान पनि दिएनन् । चरिमायालाई भाउजूले नराम्रोसँग कुटिन् । मलाई आफूहरू बहिष्कृत भएको अनुभव भयो र काठमाडौं आयौँ । उहाँले कुटाइ खाएकोे तीन दिनपछि ६ महिनाको गर्भ खेर गयो । मैले पाँच कक्षासम्म पढेको छु । उहाँले ६ कक्षादेखि पढ्न थाल्नुभयो । अहिले पशुपति क्याम्पसमा आइए पढ्दै हुनुहुन्छ । म घर बनाउने काम गर्छु । पहिले गि्रल कारखानामा काम गर्थें । ड्राइभिङ पनि गरेँ । ग्यारेजमा पनि काम गरेँ । जहाँ रहे पनि छिट्टै घर पुग्नुछ र चरिमायालाई सहयोग गर्नुछ भन्ने सोच्छु ।
तस्बिरः श्रीधर पौडेल